भान्सा कोठामा भूलेर पनि नरा’ख्नुहोस् यी चीजहरू : – Sadhaiko Khabar
भान्सा कोठामा भूलेर पनि नरा’ख्नुहोस् यी चीजहरू :
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २४, २०७८ समय: ७:५१:३२
आजको समयमा प्रत्येक व्यक्तिको घरमा एउटा भान्छा कोठा हुन्छ नै, किनभने पहिलेको समयमा मानिसहरू खुला आँगनमा माटो वा ढुङ्गाको चुला बनाइर खाना पकाउँथे । यद्यपि, आज पनि प्रायः गाउँहरूमा माटोको र ढुङ्गाको चुलामा नै खाना बनाइन्छ । जहाँसम्म, हामी आजको आधुनिक भान्छाको बारेमा कुरा गर्दैछौं ।
घरको भान्छा घर एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान हो। सबै प्रकारका भाँडाहरु भान्छा घर राखिन्छन्। तर के तपाईंलाई थाहा छ ? वास्तुशास्त्रमा भान्साको बारेमा केहि नि’यमहरू छन्, आउनुहोस् जानौँ कुन चीज भान्सामा राख्नु हुँदैन त ?
यी चीजहरूलाई कहिल्यै पनि भान्छामा नरा’ख्नुहोस् :-
सामान्यतया देखिन्छ कि मानिसहरूले भान्सामा खाली वस्तुहरू राख्दछन्, जुन प्रयोग गर्दैनन् । वास्तुशास्त्रमा यस्ता बेका’रका चीजहरू जुन प्रयोग भइरहेको छैन, ती चीजहरू कुनै पनि कुनामा राख्नु हुँदैन । त्यसो गर्नाले दो’ष लाग्छ र माता अन्नपूर्णा रि’साउँछिन् ।
किचनमा भुलेर पनि नरा’ख्नुहोस् ऐना
भुलेर पनि किचनमा ऐना नराख्नुहोस् किनभने त्यसो गर्नाले तपाईंको जीवनमा सम’स्याहरू बढाउन सक्छ । वास्तुशास्त्रको नि’यम अनुसार भान्सामा सिसा प्रयोग गर्नाले स्टोभ/ आ’गोको प्रतिबिम्ब हुन्छ, जुन सही मा’निदैन । यो भन्नुको मतलब ऐना भान्छाबाट टाढा राख्नुहोस् ।
वास्तु अनुसार औषधी किचनमा नरा’ख्नुहोस्
धेरै जसो यो देखिन्छ कि धेरै मानिसहरू भान्सामा औ’षधी राख्छन् । जसलाई बि’र्सनु हुँदैन । वास्तुका अनुसार यो विश्वास छ कि भान्साकोठामा औषधी राख्दा घरका कुनै सदस्य बि’रामी पर्न सक्छ । साथै घरमा नका’रात्मक उ’र्जाको प्रवाह बढ्नेछ। त्यसकारण औषधी भान्छाको कुनै पनि ठाउँमा भण्डार गर्नु हुँदैन ।
सिसाको भाडामा पुरानो नुन नरा’ख्नुहोस्
सिसाको भाँडामा नुन भर्नुहोस् र यसलाई भान्छामा राख्नुहोस् । वास्तु भन्छन्, कि नुनले नका’रात्मक उ’र्जा ग्रहण गर्छ र यसले घरको वातावरणलाई सकरात्मक उ’र्जाले भर्दछ । जे होस्, समय-समयमा यस नुनलाई बदल्नुहोस् । पुरानो नुनलाई पानीमा राख्नुहोस् र फेरि शुद्ध नुनले भर्नुहोस् ।
बा’सी खाना कहिल्यै पनि फ्रिजमा नरा’ख्नुहोस्
भान्सा घरमा पकाउने धेरै व्यक्तिले दुई वा तीन दिनसम्म पकाएको बा’सी खाना फ्रिजमा राख्छन्, जुन ग’लत हो । फ्रिजमा बासी खाना राख्दा रा’हु-के’तु र श’निको दो’ष हुन्छ। त्यसैले ताजा खाना सधैं फ्रिजमा राख्नुपर्दछ । यो सँगै, तपाईं पनि बेघ’रबाट सुरक्षित हुनेछ र स्वास्थ्य पनि धेरै राम्रो हु’नेछ ।